Taariikhda My Butros » Can Xayawaanka Flags Dareenka Red marka ay timaado Mr. Right?
Haddii aad aragto saaxiibkaa feeri sida dheeraad ah oo idinka mid ah, waxaa jira fursad ah in haddii eey oo aan jeclayn in aad taariikhda, laga yaabaa in aan sidoo kale. Dad badan waxay aaminsan yihiin in xilliga booqashada ugu horeeyay ee gurigaaga, haddii eey growls iyo weeynaa ka taariikhda, in marna waa calaamad wanaagsan. Fursadda in uu eegtaa wax qalloocan baannu. Alarm dawanno baxaan in aad madaxa iyo aad jiraan heegan sare, laga yaabee in Mr. Xaq ma aha xaq u, ka dib dhan.
Laakiin waa wax xaq ah, si taasi ay jirto?
Waxaan daawan videos eyda aroori wax ka wargeyska in labo ka mid ah dacas, boodaan marayo siddo oo qosol leh dhaqdhaqaaqyo ay Milkiilaha ee. Inaan garanaa awoodooda iyo waxaa lagu qabtay fikradda ah in dhammaantoodna waa eeyo waa innately awood oo ka mid ah guulahaas la yaab leh. Haa, ay yihiin. Tababar badan ka dib in uu yahay.
Waxaan ku saabsan sida eey qoyska Jordan qalafsan u dhaqmeen dhinaca ay Ka- akhri, Khan, iyo helitaanka kuwa ku xiga oo xadgudub ku cajalad qabtay. Laakiin tani waa ka dib 5 bilood ee la joogtay Khan iyo garashada waxa ay qabanayaan, ma falcelin degdeg ah ka dib shir bilowga ah.
Dad badan ayaa aaminsan eeyaha ay dareemi karaan khatar hana qaadan mid aad si raxmad kuwa ay khatar ku tahay qoyskooda. Protectiveness waxa u sabab ah qarniyo of taranto, hoos maray ka ab ka ab. Waxaan ku saabsan pooches boodayaa si loo badbaadiyo milkiilayaasha ay akhri, badanaa naftooda ku allabaryaya.
Dhinaca kale, haddii daawashada Cesar Millan, caanka ah Dog xan ayaa i baray wax, waa in milkiilayaasha inta badan ma fahmaan lixeeyey eygoodii iyagoo afka iyo adduunka sida ugu badan ee ay rajaynayaan in ay.
Waxaan jeclahay xayawaanka guriga si aad u farabadan oo aan mararka qaarkood iloobin nin in saaxiibkiis fiican nin ma aha. Isagu waa eey. By sax akhriska eeyaha, uu u suurtagashay in ay iyaga ka dhaqan-, badbaadinta milkiilayaasha ka xaalado adkeyd.
Cesar Millan qoray wargayska, "Gardarada ka imanaysaa niyad eyga iyo xukunkiisa. Niyad Eeygu ay ka imaanayso jimicsi la'aan eey, iyo xukunkiisa Eey ay ka imaanayso la'aanta hoggaanka deji-adayg. "Waxaa laga yaabaa in maadaama uusan jirin tababarka ayaa lagu dhiirigelinayaa walxood?
A guide amaanka eey – The Dog ee Dhegeystayaasha American guri eey Club ee ay soo jeedisay sabab kale, Waxa dhici karta in aad eey "aragto in ay hantida shaqsi yard iyo guuxi karaa ama qaniini inay difaacaan" Tani waxay ka dhigan tahay in ficil-aad eyga khasab ma aha in uu cadaanyo in qof gaar ah, qof daarada gudbaya waxaa loo arkaa in uu tuugu.
Behavourists fadhiisan labada dhinac ee teed ah oo arrintan ku saabsan. Adiga kaliya ayaa go'aan ka gaari kara haddii datedar eygaaga waa sax. Laakiin ka hor inta aanad tuurin Mr. Fili karo baxay albaabka, aad rabto in laga yaabo in ay isaga u siiyaan fursad ay ku cadeyso waxa uu Mr. Right.